देउवालाई पौडेलले सोधे, अदालतमा सेटिङ भएको हो ? – Samabeshi Khabar
देउवालाई पौडेलले सोधे, अदालतमा सेटिङ भएको हो ?
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:५२ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतसँग सेटिङ मिलाएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । अहिले वरिष्ठ नेता पौडेल समूह संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भभिन दबाव दिएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा ‘अदालतले जे भन्छ, त्यही मान्नुपर्छ’ भन्दै आएका छन् ।
त्यसतर्फ संकेत गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले इनरुवामा कार्यकर्ता भेलामा प्रश्न गरे, ‘अदालतमा सेटिड भएको हो ? होइन भने किन अदालतले जे गर्छ त्यही मान्छौं भनिँदैछ ?’ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार एउटामा छलफल भइरहेको बिषय अर्को ठाँउमा छलफल गर्नु हुन्न भनिएको भन्दै उनले कहिले काँही संसदमा पनि कुरा उठ्ने गरेका बताए । उनले भने, हामीले पनि कहिले काँही प्रश्न गरेका छौं । अहिले त हामीले संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका छौं । हामी बेखरबर बस्न मिल्दैन ।’
संसद विघटन हाक्काहाक्की संविधानमाथिकै अतिक्रमण भएको भन्दै उनले संविधान जोगाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व भएको बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले अघि भने, ‘संविधान जोगाएपछि चुनाव त आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि हुन्छ नै ।’
संसद विघटनलाई पार्टीले असंवैधानिक भनेको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरे, असंवैधानिक ढंगबाट गराएको चुनावमा हामी कसरी जाने रु यो हाम्रो आफ्नै निर्णय विपरित हुन्छ । पञ्चायतले गरेका चुनाव संवैधानिक नभएकाले हामीले बहिष्कार गरेका हौं । ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव पनि बहिष्कार गरेका हौं । त्यसैले संसद पुर्नस्थापना गरेर संविधान जोगाउनुको विकल्प छैन ।’